AirTags uye zvimwe zvakawanda muna 2021 kuApple | IPhone nhau
Kambani yeCupertino munguva pfupi yapfuura yanga ichitishamisa uye chokwadi ndechekuti kunyangwe ini ndisina chokwadi nehunyanzvi hwake, Tim Cook anogara aine maitire stellar kutivhara. Izvo ndezve izvi zvese kuti runyerekupe rwe "vaongorori" vekuchinja vari kurira zvakanyanya uye nekukurumidza.
Mune ino kesi Ming-Chi Kuo yakajeka nezvazvo, iyo AirTags uye nyowani Apple Augmented Reality chishandiso ichasvika panguva ya2021. Semazuva ese, muongorori haaburitse kwainobva kana kupa zvakanyanyisa misi, saka inogona kuve yake yegumi nembiri kupfura mudenga, kana kurova kwakazara, iwe unofungei?
Kuo yakanaka ine AirTag inotanga mumushumo nhasi, zvichijekesa kuti chigadzirwa ichi chinosvika mukati megore ra2021. Zvino inoenda kuAugmented Reality zvishandiso, uko zvakare zvinoita kuti zvive pachena kuti tichazviona mukati megore rino 2021 iro richangotanga, asi zvimwe zvishoma. Tinogona kufungidzira kuti yekutanga Yakawedzera Reality chigadzirwa cheiyo Cupertino kambani ingave magirazi, kunyange ini ndichiri kuona zvakaoma kuona rudzi urwu rwechigadzirwa sechinhu icho musika unokwanisa kupinza nyore. Nekudaro, anonongedza kuti magirazi aya anozove neyakareba kuzvimiririra kubva kune iyo iPhone, sezvazviri kuitika neazvino Apple Watch.
Nenzira imwecheteyo, Kuo anojekesa kuti mukati megore ra2021 tichaona maAirPod matsva, sekunge kuvhurwa kweAirPods Max kwanga kusingakwani, tichava nenhau mumazinga akaenzana emaTW headphones kubva kukambani yeCupertino, uye chokwadi ndeche zvakanyanya kana tikatarisa kuti maAirPod anochengetedza dhizaini imwechete kubvira payakatangwa. Izvo Kuo anojekesa kwatiri ndezvekuti idzi nyowani maAirPods achange ari munzeve senge neiyo "Pro" vhezheni uye isu tichava nemhando dzakasiyana dzemapads mubhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » AirTags uye zvimwe zvakawanda muna 2021 kuApple
Apple inogona kuwedzera iyo LiDAR scanner kune iyo yakazara renji ye iPhone 13